2 Songs FIFA
Fifa ayaa la liisan ay tartanka koobka adduunka shirkadaha ciyaarta computer muddo ku dhow soddon sannadood, iyo waxa ay leedahay in la yiri, inta badan guul yar, ugu yaraan marka la eego helitaanka ciyaar fiican soo baxay waxaa ka mid ah, hubiyo inay dhan u suurtagashay in aan ahay ka dhigi qadarka Xukumaysa Iana Siiyey lacag dabcan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah kuwa run ahaantii weyn ka mid ah qashinka, aynu u qulqusho ugu fiican kulan.
Iyadoo laga duulayo kulankii Fifa 14 engine la uqaadineed u tayo, saxay baasaska iyo dib uga shaqayn ah oo ka mid ah 'marka hore - taabashada' awood ay xaqiiqo dheeraad ah, sida ay 2010 abuulanka, kulankaan waxaa ka mid ah nidaamka isreebreebka buuxda loo yaqaan Road in koobka adduunka, halka ay jiraan yar version ah online, Road in Rio de Janeiro, taas oo u oggolaanaysa in 12 ciyaaryahan inuu ka ciyaaro tartanka iyo ciyaaro ee garoomada koobka adduunka.
Gameplay sidan ka mid yahay mid aad u badan oo caaryada Fifa sida aan hadda u ogaado, uqaadineed ka sameeyey horay u sameyn wax isbedel ah, gaar ahaan ciyaartoyda ugu fiican la ratings xirfad sare. Garaaf ahaan waa state of tahay, iyo waxay muujinaysaa horumar la taaban karo ka version hore ee ciyaarta.
Guud ahaan, waa cadaalad ah oo u sheegay in kulanka Fifa World Cup ugu dambeeyey run ahaantii waa weynaa.
2. 2010 FIFA World Cup Koonfur Afrika
Malaha jilitaanka ugu dhameystiran ee koobka adduunka ee abid geliyey kulan ilaa cadadkii ugu dambeeyay. 199 dal oo kala duwan si ay u doortaan in ay qaataan ka dhex isreebreebka ah ka hor inta aadan xitaa in ay is koobka!
Naqshadeynta waxaa la dhaafay laga yaabaa in maanta laakiin ahaayeen state of tahay waqtiga, iyo sanqadha ayaa, si ay dhegta, aan weli la dhaafay. Saaxirad doorasho ka ciyaari ololaha in isreebreebka bareejeeyo ama laga bilaabo finals sida mid ka mid ah 32 kooxood oo dhab ahaantii baxday, gameplay waa sida aad ka fili lahayd ka ciyaar ku salaysan Fifa 2010, xariif ah, hawlanaa oo xiiso leh. Ku dar in play online oo aad leedahay goolka guusha.
Isku day geesinimo ah ee ay ka mid yihiin tartanka oo dhan 2 sano gudahood hal kulan, waxa ay inta badan guuleysto. Waxaan su'aalo weydiin karaan inta qof yeesheen San Marino marayo olole isreebreebka oo dhan oo laga yaabaa dhex koobka, laakiin ikhtiyaarka halkaas diyaar u yahay qof kasta oo doonaya in ay isku dayaan waxaan u maleynayaa.
Kulankii 3D labaad, tani waxay ka mar kale ku salaysan ciyaarta Fifa ee xilligii, inkasta oo halkan waxa ay ka dhigan tahay nooc ka mid ah guriga kala-barka Fifa 2002 iyo 2003 Fifa, taas oo ka dhigaysa u gameplay oo xiiso leh iyo waa arrin ciyaar adag tahay in sayidkiisa. Kulankii ugu horeeyay ee Koobka Adduunka inuu ciyaaro isu ekaanshaha la garan karo oo ka mid ah ciyaartoyda dhabta ah (in kasta oo qaar ka mid ah waxay ku sii gulaystaan ​​loo eego kuwa kale waxa ay leedahay in lagu sheegay) iyo sidoo kale kulankii ugu horeeyay ee koobka aduunka inuu ciyaaro kulanka Madaxweyne Siilaanyo ka.
Ciyaarta ayaa u taagan soo baxay ay saakay ahaantii, waxa ugu wanaagsan ee la heli karo waqti, oo ulihiina wuxuu awood u samaysaa kulanka xirfad ku salaysan iyo ilaa garsooraha noqon karto in heerka in ka samaysaa u adag tahay.
98p koobka aduunka 4.
Kulan kale oo ku salaysan ciyaarta Fifa ee xilligii, World Cup 98 ahayd isku daygii ugu horeeyay ee dhabta ah si ay u kiciyaan kubada cagta dhabta ah, sida ay u soo ciyaaray waxaa halkan adduunka dhabta ah, ciyaar computer koobka aduunka, waxaa sidoo kale uu ahaa isku daygii ugu horeeyay ee muujinayay in xirmooyinka kooxda sax ah ciyaartoyda iyo, siin xadka garaafyada waqtiga, iyo guul weyn oo ahayd.
Waxa kale oo ay aheyd kulankii ugu horeysay ee koobka aduunka inuu ciyaaro naqshadeynta style 3D, dhammaan nuquladii hore ee kulan Koobka Adduunka ahaayeen 2D iyo viewed marka laga eego hogaanka hoos ah. By heerarka maanta muuqaallo kale ee masaakiinta ah oo dhan u muuqataa mid aad u qorin runtii, si kastaba ha ahaatee, inkasta oo ay ka maqan oo dhan fursado ah ay yihiin ee deggan cusub ee aan soo magacawnay kor ku xusan, gameplay halkan waa qurux badan in ay xog.
'94 5. World Cup USA
Haddii aan nahay daacad, kulan kuwan waxaa hore u qaadanaysay khafiif dhulka halkaas oo tayo leh oo ka walwalsan, waxaad odhan karaa shan sare waxaa iskala yara laakiin waxaan u samray doonaa si kastaba ha ahaatee.
World Cup '94 waxaa lagu soo bandhigay aragtida indhaha shimbir, waxa ay u muuqataa jiidasho leh marka la eego wakhtiga ay ku soo saaray, ka bedeley iyo bandhig kale waxaa aad u slickly samaysay, oo ciyaarta ka heli karaa qaabab badan ahaa.
Tani waxa ay ahayd ciyaarta adduunka ee ugu dambeeyay koobka in la sameeyo muuqaalka ah on nidaam Sega, Megadrive ah, iyo sidoo kale mid ka mid ah la soo dhaafay ka muuqan list ah. By markii ugu Cup ee soo socda World giringiriyey agagaarka Playstation iyo Nintendo 64 qaaday muuqaalka ciyaaraha ka. Sidoo kale waa daaqadaha hore ciyaarta adduunka hooyo koobka, qoraalkii hore iyagoo kulan MS-DOS.
Gameplay caqli leedahay arrimaha gacanta qaar ka mid ah, laakiin waa tan ugu fiican oo ka mid ah qoraalkii 2D oo ka mid ah kulan koobka adduunka in la sameeyay.
Guud ahaan farabadan oo isku darsan, iyo in uu yahay sida ugu fiican iyaga ka mid ah. Laakiin iftiinka ka jira, iyo kulan ka dib run ahaantii ku nool yihiin ilaa qiimaha madadaalada ee Koobka Adduunka laftiisa ah.
> Resource > Game > The Top 5 Fifa World Cup Video Games